Mon, May 25, 2020 at 1:19am
सलमानको प्रतिक्षित सिनेमा 'दबंग ३' को रिलिज मिति सर्ने
काठमाडौँ, २१ भदौ सलमान खानको प्रतिक्षित सिनेमा 'दबंग ३' को रिलिज मिति सर्ने भएको छ। यसअघि सिनेमा यसैवर्षको डिसेम्बरमा २० मा रिलिज हुने तय भएको थियो। तर 'इंशाअल्लाह' सिनेमा सलमान नगर्ने भएपछि सलमान 'दंबग ३'को रिलिज मिति सार्ने मुडमा पुगेको बताइन्छ। 'इंशाअल्लाह'लाई ईदमा रिलिज गर्ने तयारीमा सलमान रहेकोमा अब सो सिनेमा नहुने भएपछि उनले सो मितिमा 'दबंग ३' रिलिज गर्ने सोच बनाइरहेको बताइन्छ। त्यसो..
एजेन्सी, १९ भदौ ख्यातिप्राप्त बलिउड अभिनेता सनी देओलका छोरा करण देओल बलिउडमा प्रवेश गर्ने भएका छन् । सनी देओलकै निर्देशनमा रहेका चलचित्र ‘पल पल दिलके पास’बाट उनले डेब्यु गरेका हुन् । करणसँगै अभिनेत्री सहर बाम्बा पनि यसै फिल्मबाट डेब्यु गर्दै छिन् । सनी देओलले आफू पछिल्ला दुई वर्षयता यही फिल्मको निर्देशनमा खटिरहेकाले फिल्मबाट निकै आशावादी रहेको बताएका छन् । डेब्यु फिल्मबाट करण दर्शकको..
प्रभासको फिल्म ‘साहो’ विवादमा, हलिउड फिल्मको हुबहु नक्कल
नयाँ दिल्ली, १७ भदौ फिल्म ‘बाहुबली’पछि अभिनेता प्रभासको नयाँ फिल्म ‘साहो’ विवादमा घेरिएको छ । गत शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको फिलम ‘साहो’ का निर्मातामाथि फ्रान्सेली फिल्म निर्देशक जरोम सलेले आफ्नो कामको नक्कल गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, “यस्तो लाग्छ कि ‘लाजरे विन्च’ को यो सेकेण्ड ‘फ्रीमेक’ पहलो जत्ति नै नराम्रो छ । यसैले तेलुगु निर्देशकहरु यदि तपाईं मेरो काम..
काठमाडौँ, १६ भदौ दक्षिण भारतीय चलचित्र उद्योगका सुपरस्टार प्रभास र बलिउड अभिनेत्री श्रद्धा कपूरको बहुप्रतिक्षित चलचित्र ‘साहो’ अगष्ट ३० मा प्रदर्शन भैसकेको छ । चलचित्रलाई लिएर निकै उत्साहित भएका दर्शकहरु प्रदर्शनको मिति कुरेर बसेका थिए । तर चलचित्र प्रदर्शनमा आएसँगै चलचित्र समीक्षकले नकारात्मक समीक्षा दिएपछि चलचित्रले दर्शक तथा फ्यानहरुको अपेक्षा पूरा गर्न सकेन । चलचित्रको क्रेज हेर्दा पहिलो दिन ५० करोड भारु भन्दा..
बलिउड चलचित्र ‘शाहो’को ट्वीटरमा उड्दैछ मजाक
एजेन्सी, १४ भदौ सुपरस्टार प्रभास र श्रद्धा कपुर अभिनित चलचित्र ‘शाहो’ यस वर्षको सबैभन्दा ठूलो हिट हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, चलचित्रले समीक्षकहरुबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको छैन भने दर्शकहरु पनि चलचित्रबाट निराश बनेका छन् । यतिबेला सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा चलचित्रप्रति आक्रोश पोखिँदैछ । ३५० करोड भारु त्यतिकै खेर फालेको भन्दै उनीहरुले चलचित्रको भीएफएक्स, लेखन र सिक्रिनप्लेको आलोचना गरेका छन् । प्रभासले पनि..
काठमाडौँ, १३ भदौ फिल्म साहोका लागि प्रभासका प्रशंसक अत्यधिक उत्साहित छन् । शुक्रवार फिल्म रिलिज भइसकेको छ । बलिउडको सबभन्दा महंगो फिल्म मानिएको साहोमा दमदार एक्सन सिक्वेन्स र विशाल स्टारकास्ट छ । फिल्मको कथामा निकै ट्विस्ट र टर्न छ । हिरोसमक्ष अनेकौं भिलेन आइलाग्छन् । फिल्मको कथा मुम्बईमा भएको ठूलो डकैतीबाट शुरू हुन्छ । एउटा ब्ल्याक बक्सको खोजीमा सबैजना हुन्छन् र त्यसैमा सबैको..
बलिउड चलचित्र 'साहो'का बारेमा १२ रोचक जानकारी
एजेन्सी, १० भदौ साहो, प्रदर्शनको तयारीमा छ । यो बहुप्रतिक्षित चलचित्र हो । चलचित्र घोषण भएदेखि नै यसले व्यापक रुपमा चर्चा पाएको छ । त्यसको केही कारण छन् । जस्तो कि, यो चलचित्रमा अभिनेता प्रभास मुख्य भूमिकामा छन् । बाहुबलीबाट ख्याती कमाएका उनी यस चलचित्रमा भएकाले मात्र पनि होइन, यो चलचित्र निकै ठूलो लगानीमा बनेको हो । भारु ३ सय करोड लागतमा..
इदमा 'किक २' लिएर आउँदै सलमान
काठमाडौं, १० भदाै । बलिउड अभिनेता सलमान खानको चलचित्र किककाे सिक्वेल बन्ने भएको छ । सलमान खानको किकलाई दर्शकहरुले निकै रुचाएका थिए ।अब यो फिल्मको दोस्रो सिक्वेल बन्ने भएको हाे । अभिनेता खानले यस फिल्मको रिलिज मिति समेत दर्शकमाझ सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।सलमानले केही दिन अगाडि मात्रै निर्देशक संजय लीला भंसालीसँगको फिल्म इन्साअल्लाहको रिलिज डेट पछाडि सारिएको जानकारी गराएका थिए । जसका कारण उनका..
चलचित्र ‘चपली हाइट ३’मा स्वस्तिमा
काठमाडौँ, १० भदौ चलचित्र ‘चपली हाइट ३’को घोषणा छिटै नै हुँदैछ । अर्जुन कुमारको निर्माणमा तयार हुन लागेको यस चलचित्रका लागि कलाकारको फाइनल गरिसकिएको छ । तर, निर्माणपक्षले भने कलाकारको बारेमा केही पनि बताएको छैन । यसैविच, प्राप्त खबर अनुसार यो चलचित्रका लागि नायिका स्वस्तिमा खड्का फाइनल भएकी छिन् । केही दिन अगाडि मात्र नायिका खड्काले एउटा सिक्वेल चलचित्रको कथा पढिरहेको र आफूलाई मन..
बाहुबली-३ आउने सम्भावना कति ? यसो भन्छन् 'प्रभास'
काठमाडौँ, ७ भदौ अभिनेता प्रभासलाई चलचित्र बाहुबलीले विश्वविख्यात बनायो। चलचित्र दुई भागमा बनेको थियो। पहिलो भागको तुलनामा दोस्रो भागले व्यापारिक हिसाबले धेरै कमाई गरेको थियो। एसएस राजमौलीले निर्देशन गरेको यो चलचित्रको दोस्रो पाटो प्रदर्शन पछाडि नै सोध्ने गरिएको थियो, यो चलचित्रको तेस्रो भाग आउँछ की आउँदैन भनेर। तर अभिनेता प्रभासले यो कथा यतिमै सक्किन्छ भनेर त्यो समय सबैलाई निराश बनाएका थिए, तर प्रभासले..
फ्राइडे रिलिज : 'जाइरा'सँगै दुई हलिउड फिल्म पर्दामा
काठमाडौँ, ६ भदौ फ्राइडे रिलिज अन्तर्गत यस साता एक मात्र नेपाली फिल्म 'जाइरा' ले सोलो रिलिजको मौका पाएको छ । स्पोर्टस् ड्रामा 'जाइरा'लाई आशुतोष राज श्रेष्ठले निर्देशन गरेका हुन्। नम्रता श्रेष्ठ, अनुप बिक्रम शाही, प्रमोद अग्रहरी, श्रृजना रेग्मी, सुजिता श्रेष्ठ, सम्राट मगर लगाएतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ। त्यस्तै हलिउडतर्फ दुई फिल्म 'वान्स अपन अ टाइम इन हलिउड' र 'द एङ्ग्री बर्ड्स मुभी'को दोस्रो..
काठमाडौँ, ४ भदौ नेपाली फिल्मको विभिन्न बजारहरुमध्ये प्राय नेपालले अंगिकृत गरेको माध्यम भने सामाजिक सञ्जाल युट्युब मात्र हो । पछिल्लो समय आईफ्लिक्स र नेटफ्लिक्स केही मात्रामा प्रयोग भएको देखिन्छ । ओएआर डिजिटलले भने अनलाईनको नयाँ एप्स सार्वजनिक गरेको छ । उक्त एप्सलाई ‘भिडियो पसल’ नाम दिएको छ । ‘भिडियो पसल’ अन्य देशरुमा पनि उपलब्ध छ । नेपाली फिल्म र नेपालीका लागि भने..
मुम्बई, ४ भदाै । बलिउड नायिका परिणिती चोपडा अहिले हलिउड चलचित्रकाे हिन्दी रिमेकमा व्यस्त छिन् ।हलिउड चलचित्र ‘द गर्ल वन द ट्रेन’को हिन्दी रिमेकमा परणितीले मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेकी हुन् । यस चलचित्रलाई अहिले सम्म नाम दिइएको छैन। भर्खरै परणितीको फिल्ममा रहेकाे लुक्स सार्वजनिक भएको छ । दुई तस्विरमा परणितीको लुक्स सार्वजनिक गरिएको हो । सार्वजनिक तस्विरमा परणितीलाई चोट लागेको देखाइएको छ ।..
फिल्मको प्रिमियरका लागि सन्नी लियोनी नेपाल आउने पक्का
काठमाडौं भदौ ४ । नेपाली फिल्म ‘पासवर्ड’को ‘आजको शाम’ बोलमा अभिनय गरेकी बलिउडकी अभिनेत्री सन्नी लियोनी गीत करिब ४० लाखले हेरिसकेका छन् । बलिउडकी अभिनेत्री सन्नी लियोनी नेपाली फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी छन् । उनले यस गीतका लागि ३ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक लिएकी थिइन् । सन्नी जोडिएसँगै चर्चामा रहेको फिल्म ‘पासवर्ड’ यही भदौ २७ गतेदेखि रिलिज हुने तयारीमा रहेको छ । फिल्मको प्रिमियर प्रदर्शन राजधानी..
काठमाडौं, ३ भदाै । सिओल अन्तराष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा नेपाली चलचित्र ‘हन्ड्रेड रुपिज’ मनोनयनमा परेको छ। दक्षिण कोरियामा सेप्टेम्बर २६ देखि २६ सम्म हुने यो महोत्सवमा विभिन्न विधा मध्ये ‘सर्ट मुभि’ विधामा नेपाली चलचित्र ‘हन्ड्रेड रुपिज’ परेको हो। सिओलको इमु आर्टस्पेयर, डेयहान सिनेमा, आई आर्ट सिउल स्पेर र नामसान केमेस्ट्रि’ मा चलचित्रहरु प्रदर्शन गरिदैछ। यो महोत्सवमा १ सय २२ वटा चलचित्रहरु प्रदर्शन हुँदैछन्। चलचित्र ‘हन्ड्रेड..
काठमाडौं, २ भदाै । गत साउन ३० गते प्रदर्शनमा आएकाे फिल्म 'हजार जुनी सम्म'काे नयाँ गीत सार्वजनिक भएकाे छ ‘सत्य सत्य’ बोल रहेको गीत प्रेमरसले भरिएको छ । गीतमा अभिनेता आर्यन सिग्देल र अभिनेत्री प्रियङ्का कार्की रोमान्टिक भूमिकामा देखिएका छन् गीतमा प्रियंकाको बोल्ड अन्दाज समेत देख्न सकिन्छ । प्रविन पौडेलको संगीत रहेको गीतको शब्द मानस विक्रम थापाले कोरेका हुन् । कथाको सस्बेन्स खुल्ने डरले गीत रिलिज..
रिलिज हुनु अघि नै प्रभासकाे 'साहो'ले कमायाे ३ अर्ब २० कराेड
नयाँ दिल्ली, ३१ साउन । साउथ इण्डियन सुपरस्टार प्रभास तथा बलिउड नायिका श्रद्धा कपुरको नयाँ फिल्म 'साहो' ले रिलिज अघि नै राम्राे बजार ओगटेको छ । हालसालै रिलिज यो फिल्मको ट्रेलरले निकै प्रशंशा बटुलेकाे छ । फिल्मको ट्रेलर युट्युब ट्रेण्डिङकाे तेस्राे नम्बरमा छ । ३० अगष्टमा प्रदर्शनमा आउने यस फिल्मको भिएफएक्स, स्टन्ट सिन, फाइट सिक्वेन्सले दर्शकको खुबै माया पाएको छ। बहुप्रतिक्षित यस फिल्मको बजेट ३ सय..
आर्यन र स्वस्तिमाको फिल्म ‘हजार जुनी सम्म’ प्रदर्शनमा, कस्ताे गर्ला व्यापार ?
काठमाडौं, ३० साउन । आज नेपाली चलचित्र ‘हजार जुनी सम्म’ रिलिज भएको छ। जनैपूर्णिमाको अवसर भन्दै चलचित्र ‘हजार जुनी सम्म’ बिहीबार रिलिज भएको छ। चलचित्रमा आर्यन सिग्देल, स्वस्तिमा खड्का, सलोन बस्नेत, संचिता लुइटेल लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ। विकासराज आचार्यको निर्देशनमा चलचित्र ‘हजार जुनी सम्म’ तयार भएको हो। कविता रेग्मी कार्यकारी निर्माता रहेको चलचित्रमा विशाल चाम्लिङको लगानी छ। चलचित्रको सुरुवाती व्यापार औषत..
अजय-काजोलको जोडी एकसाथ पर्दामा देखिँदै
काठमाडौं, २९ साउन बलिउडमा लोकप्रिय जोडीमध्येका अजय देवगन र काजोल एक हुन् । यी दुई जोडी अब एकैसाथ फिल्ममा देखिने भएका छन् । रोमान्टिक कमेडी फिल्ममा उनीहरू सँगै देखिने खुलासा भएको छ । समाचारका अनुसार देवगन परिवार कम्पनीले फिल्मको कथालाई ध्यानमा राख्दै तीनवटा शीर्षक दर्ता गरेको छ। स्क्रिप्टमा अझै काम भइरहेको छ । रिपोर्टका अनुसार, काजोलको जन्मदिनमा अजयसँग समय बिताउन भुज जाँदै गरेको..
फिल्म ‘हजार जुनीसम्म’ले फर्काउला त आर्यन सिग्देलको गुमेकाे क्रेज ?
काठमाडौं, २८ साउन । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा राम्राे क्रेज बनाएका नायक हुन् आर्यन सिग्देल । उनी कलिउड उद्याेगमा चकलेटी नायकका रूपमा आफ्नाे पहिचान बनाएका छन् । तर, पछिल्लो समय उनकाे क्रेज गुम्दै गएकाे छ । एक समय राम्रो क्रेज भएका सिग्देलको अहिले दर्शकमा खासै क्रेज छैन । उनको फिल्म नआएका कारण क्रेज नभएका पनि होइन । फाट्टफुट्ट फिल्म आइरहेको छ । केही पहिले उनको ‘कायरा’..
काठमाडौं, २७ साउन । शुक्रबारदेखि प्रदर्शनरत चलचित्र साइनो करोड क्लबमा पुग्न लागेको छ। फिल्मले ३ दिनमा गरेकाे व्यापारले यो संकेत गरेको हो। फिल्म वितरक ब्यांकेटसका अनुसार साइनोले तीन दिनमा देशभरबाट ७० लाखको हाराहारी कलेक्सन गरेको छ। नेपाली चलचित्रकी प्रथम नायिका भुवन थापा चन्दले निर्माण गरेको चलचित्र साइनो अहिले देशभरका ६ दर्जनभन्दा बढी हलमा प्रदर्शन भइरहेको छ। पहिलो दिन औसत कलेक्सन गरे पनि दोस्रो दिन..
‘साहो’को ट्रेलर रिलिजपछि ‘बाहुबली’को रेकर्ड तोड्ने अपेक्षा [ट्रेलरसहित]
काठमाडाै‌‌, २६ साउन । ‘साहो’ फिल्मको ट्रेलर हेरेर धेरैले प्रभासको पछिल्लो सुपरहिट फिल्म ‘बाहुबली २’को रेकर्ड तोड्ने अपेक्षा गरेका छन् । साउथ फिल्मबाट बलिउड प्रवेश गरेका अभिनेता प्रभासको बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘साहो’को ट्रेलर शनिवार रिलिज भएको छ । फिल्मको ट्रेलर एक्सनले भरपुर निकै दमदार रहेको छ । रिलिजको २४ घण्टामै ट्रेलरको १ करोड बढी भ्यूज भएपछि सो अड्ल गरिएको हो । फिल्मको ट्रेलर चारवटा..
२० केजी तौल घटाउन आमिरको यस्तो योजना
काठमाडौँ, २२ साउन बलिउड अभिनेता आमिर खानले नयाँ चलचित्र ‘लाल सिंह चड्डा’मा काम गर्दैछन् । यो चलचित्रको छायांकन केही महिनापछि सुरु हुँदैछ । नायक आमिर खान भने अहिले चलचित्रको स्क्रिप्टमा व्यस्त छन् । चलचित्रको स्क्रिप्टमा काम गरिरहेका आमिर खानले यसका लागि छुट्टै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । भारतीय मिडियाका अनुसार, आमिरले चलचित्रका लागि २० केजी तौल घटाउनुपर्नेछ । उनले तौल घटाउनका लागि विशेष ट्रेनिङ सेप्टेम्बरबाट..
अर्को साताबाट पुनः प्रशारण हुँदैछ ‘भद्रगोल’
काठमाडौं, २१ साउन । कही साता यता प्रशारण नभएकाे हास्य टेलीश्रृंखला ‘भद्रगोल’ पुनः प्रशारण हुने भएको छ । हास्य टेलीश्रृंखला ‘भद्रगोल’ अबको केही हप्तामा प्रशारण हुने भद्रगोल’का निर्देशक तथा लेखक अर्जुन घिमिरेकाे भनाइ छ। निर्देशक घिमिरेले भने, 'प्राविधिक कारणले केही साता प्रशारण नभएको मात्रै हो । केही दिनमै हामी भद्रगोलकै नयाँ श्रृंखला लिएर आउने छौं। दर्शकको यति धेरै माया र माग हुँदाहुँदै बन्द गर्दैनौँ ।' नेपाल..
यी नेपाली चलचित्र हेरिए करोडभन्दा धेरै पटक युट्यबुमा
काठमाडौं, २१ साउन । नेपाली चलचित्र निर्माणको आंकडा संख्यातमक हिसाबले बढ्दाे छ । तर गुणात्मक चलचित्र बनाउनेकाे संख्या बढ्न सकेकाे छैन । वर्लाषमा चलचित्गेरहरू धेरै निर्माण भए पनि बक्स अफिसमा राम्रो प्रभाव बनाउन सकेका छैनन् । गत वर्ष ९४ चलचित्र रिलिज हुँदा आधा दर्जनले मात्रै लगानी सुरक्षित गरे । बाँकी सबै चलचित्रले घाटा बेहोर्नु पर्यो । अधिकांश चलचित्र करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा बन्छन् ।..
४० करोड पारिश्रमिक दिदां पनि विजयले रिमेकमा काम गर्न मानेनन्
काठमाडौँ, २० साउन करण जोहरको ४० करोड भारूको प्रस्ताव तेलेगु अभिनेता विजय देवराकोंडाले अस्वीकार गरेका छन् । विजय 'अर्जुन रेड्डी' सिनेमाका अभिनेता हुन् । शाहिद कपुर स्टारर 'कबीर सिंह' यहि सिनेमाको हिन्दी रिमेक हो। विजयले हालै रिलिज भएको 'डियर कमरेड' सिनेमाको हिन्दी रिमेकका लागि करणले दिएको ४० करोड भारू पारिश्रमिकको प्रस्ताव लत्याएका हुन् । करणले यस सिनेमाको हिन्दी रिमेक राइट केहि दिन..
१३ वर्षपछि चलचित्र ‘निकम्मा’बाट कमब्याक गर्दै शिल्पा
काठमाडौं १६ साउन चलचित्र ‘निकम्मा’ सब्बिर खानको निर्देशनमा बन्दैछ । यो चलचित्रलाई एक्सन र प्रेमको कथा भनिएको छ । यो चलचित्रमा नयाँ जोडीहरु अभिमन्यू देसानी र सिर्ले सेतियाले काम गर्दैछन् । केही दिन अगाडि मात्र यो चलचित्र र मुख्य कलाकारको घोषणा भएको थियो । तर, अब यो चलचित्रमा बलिउडकी सुन्दरी नायिका शिल्पा सेट्टीले पनि काम गर्ने भएकी छिन् । शिल्पा १३ बर्षपछि आफूलाई पर्दामा..
‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ असोज ३ मा सर्यो
काठमाडौँ, १३ साउन भदौ १३ गते रिलिज हुने भनिएको चलचित्र ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डीले आफ्नो रिलिज मितिलाई दुई साता पछाडि सारेको छ । अब भने यो चलचित्र असोजको ३ गते रिलिज हुने पक्का भएको छ । यो चलचित्रको प्राविधिक काम नसकिएला केही साता पछि सारिएको निर्देशक रामबाबु गुरुङले बताएका छन् । चलचित्रका वितरक मनोज राठीले भने–‘मलाई पनि रामबाबुजीले फोन गरेर काम नभ्याउने जानकारी दिनुभयो..
यस्ताे छ सन्नी लियोनीकाे आइटम डान्स रहेकाे फिल्म ‘पासवर्ड’को फस्टलुक
काठमाडौं, १३ साउन। बलिउड नायिका सन्नी लियोनीले आइटम डान्स गरेकाे नेपाली चलचित्र ‘पासवर्ड’को फस्टलुक सार्वजनिक गरिएको छ। चलचित्रको आइटम गीत सार्वजनिक भएपछि फस्टलुक रिलिज गरिएको हो। आइटम गीत बलिउड नायिका सन्नी लियोनीलाई दिइएको छ। पोष्टरमा पनि मुख्य कलाकार भन्दा उनलाई बढी स्थान दिइएको छ। नायिका लियोनी भने कामुक अवतारमा छिन्। चलचित्रमा मुख्य नायक अनुप विक्रम शाही र विक्रम जोशीको भिडन्त देख्न सकिन्छ।..
काठमाडौँ, १२ साउन नायक विपिन कार्की र नायिका स्वस्तिमा खड्का वि.सं २०७५ सालको ‘राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार’बाट पुरस्कृत भए । विपिनले चलचित्र ‘प्रसाद’बाट अवार्ड पाएका थिए भने स्वस्तिमाले ‘बुलबुल’बाट अवार्ड आफ्नो पोल्टामा पारेकी थिइन् । दुबैले राम्रो अभिनय गरेकै कारण अवार्ड प्राप्त गरेका थिए । दर्शकले यी दुई कलाकारलाई एकसाथ पर्दामा पनि हेर्न चाहेका छन् । नायक विपिन कार्कीले पनि आफूलाई स्वस्तिमासँग काम गर्न..
Results 546: You are at page3of 19